खेल र कविता - खेल द्वारा प्रेरित
खेल र कविता
खेल द्वारा प्रेरित
खेल र कविता पोडकास्ट
उप मेनु टगल गर्नुहोस्
एसी / डीसी लाइभ: रक ब्यान्ड सीप
अल्फ्रेड चिकन खेल र कविता
यो बोक्सी! खेल र कविता
डेजा वु २ खेल र कविता
सम्पत्ति के हो? खेल प्रोग्रामिंग
प्रमोदवनमा खेल र कविता
Varsav खेल स्टुडियो
प्रकाशित 15। मई 2022 14। फेब्रुअरी 2022 By क्लाउडिया Wendt	प्रत्रिक्रिया छैन Varsav खेल स्टुडियोमा
Varsav Game Studios 2016 कर्मचारीहरु संग 40 मा स्थापित एक स्टूडियो हो। यो असाधारण मेकानिक्स र अद्वितीय मुख्य पात्रहरूमा फोकसको साथ - फरक परिप्रेक्ष्यबाट खेलहरू विकास गर्नमा माहिर छ। स्टुडियोको पहिलो उत्पादन, बी सिम्युलेटर, नोभेम्बर 14, 2019 मा PC, PlayStation 4, Xbox One र Nintendo Switch को लागि एकै साथ रिलीज गरिएको थियो।
थप पढ्नुहोस् "वर्षाव गेम स्टुडियो" »
सम्झनाहरु फेरी बताईन्छ
प्रकाशित 15। मई 2022 By क्लाउडिया Wendt	प्रत्रिक्रिया छैन सम्झनाहरू रिटोल्डमा
मेमोरिज रिटोल्डले नोभेम्बर 11, 1918 मा समाप्त भएको पहिलो विश्व युद्धको कथा सेट गर्दछ। खेल शान्तिको लागि अनुरोध हो। Memories Retold केही सिपाहीहरूले केही सङ्गीतले आफूलाई खुसी पार्न खोजिरहेका छन्। कोही गिटार बजाउँदै थिए र तपाईंले भर्खरै भेटेको कम्पनीमा भारतीय केटा नाचिरहेको थियो। सुनिन्छ...
थप पढ्नुहोस् "सम्झनाहरू फेरियो" »
हार्ड वेस्ट २: २०२२ को रिलीज
प्रकाशित 15। मई 2022 15। मई 2022 By जोसेफिना मेलोनी	प्रत्रिक्रिया छैन हार्ड वेस्ट २ मा: २०२२ को रिलीज
जंगली पश्चिम डरलाग्दो भेट्छ। कार्य भूमिका खेल्ने खेल हार्ड वेस्ट2मा, असंख्य साहसिक र विरोधीहरूले तपाईंलाई पर्खिरहेका छन्, जुन प्रकृतिमा सधैं मानव हुँदैनन्। यस लेखमा, हामी तपाईंलाई सिक्वेलमा के आशा गर्ने बताउँछौं। तपाईंले डाकू जिन कार्टर, एक खतरनाक र कुख्यात डाकुको भूमिका लिनुहुन्छ। जब जिनले थाहा पाउँछ कि भूत रेल बोकेको छ ...
थप पढ्नुहोस् "हार्ड वेस्ट 2: रिलीज 2022" »
खेल र कविता, समाचार
प्रकाशित 14। मई 2022 14। फेब्रुअरी 2022 By क्लाउडिया Wendt	प्रत्रिक्रिया छैन दिग्गज विद्रोह गर्न
जायन्ट्स विद्रोहले तपाईंलाई विशालको रूपमा कैदबाट उम्कन दिन्छ। Varsav Game Studios ले एक्शन स्प्याकल ल्यायो। मानिसहरु मा बदला एक विशाल को रूप मा तपाईको लक्ष्य मानिसहरु मा बदला छ। तिनीहरूले राक्षसहरूलाई दास बनाए र एक विशालको रूपमा तपाईंले आफ्नो बदला लिनुभयो। तपाईं भाग्ने सानाहरूलाई कुल्चीउनुहुन्छ, कुल्चाउनुहुन्छ र चकनाचुर गर्नुहुन्छ। तिमी नष्ट...
थप पढ्नुहोस् "विशाल विद्रोह" »
प्रकाशित 13। मई 2022 By क्लाउडिया Wendt	प्रत्रिक्रिया छैन फुसफुसे संसारमा
Whispered World est un merveilleux jeu de conte de fees du développeur Daedalic।
थप पढ्नुहोस् "द व्हिस्पर्ड संसार" »
मूलतः 2019-04-26 14:19:04 पोस्ट।
आधारहरू लोड गरियो २
प्रकाशित 13। मई 2022 11। फेब्रुअरी 2022 By क्लाउडिया Wendt	प्रत्रिक्रिया छैन आधारहरूमा लोड गरिएको 4
बेस लोडेड4तेस्रो भागको सुधारिएको कार्यान्वयन बाहेक केही होइन। यो पनि त्यही वर्ष तेस्रो भागको रूपमा प्रकाशित भएको थियो। NES को लागी जारी गरिएको बेस लोडेड गेमहरूको लागि यो खेल मुकुटको महिमा हो र यसले धेरै सुधारहरू ल्याउँछ। बेसबल चौथो - बेस लोडेड4बेस लोडेड4हो…
थप पढ्नुहोस् "आधारहरू लोड गरिएका 4" »
मेमोरी Profiler मा काम गर्नुहुन्छ
प्रकाशित 13। मई 2022 By क्लाउडिया Wendt	प्रत्रिक्रिया छैन मेमोरी प्रोफाइलरसँग काम गर्न
मेमोरी प्रोफाइलर Unity 2018.3 वा पछिको लागि नयाँ प्याकेज हो जसले तपाईंलाई मेमोरी चुहावट र खण्डीकरण पत्ता लगाउन परियोजनाको मेमोरी प्रयोगको विश्लेषण गर्न अनुमति दिन्छ। मेमोरी चुहावट हुन सक्छ जब मेमोरी आवंटित हुन्छ तर मेमोरीलाई आवश्यक पर्दैन पछि पुन: प्रयोगको लागि कहिल्यै डिललोकेटेड हुँदैन। यस ट्यूटोरियलमा, तपाइँ कसरी सिक्नुहुनेछ ...
थप पढ्नुहोस् "मेमोरी प्रोफाइलरसँग काम गर्दै" »
अनन्त फिर्ती - कालो अस्तित्व
प्रकाशित 13। मई 2022 13। मई 2022 By क्लाउडिया Wendt	प्रत्रिक्रिया छैन अनन्त फिर्ता - कालो अस्तित्व
इटरनल रिटर्न: ब्ल्याक सर्वाइभल बलियो MOBA प्रभावको साथ एक युद्ध रोयाल खेल हो। यो अघिल्लो खेल अमर आत्मा: कालो अस्तित्व विकासकर्ता निम्बल न्यूरोन द्वारा निर्माण गर्दछ। पुराना परिचितहरू अनन्त फिर्तामा खेलले समान पात्रहरू, वस्तुहरू, र स्थानहरू प्रयोग गर्दछ जुन क्षमताहरू र थप तथ्याङ्कहरू सहितको शीर्ष-डाउन MOBA अनुभूतिको लागि पुन: कार्य गरिएको छ। यसले डुओ र स्क्वाड मोडहरू पनि थप्छ...
थप पढ्नुहोस् "अनन्त फिर्ती - कालो अस्तित्व" »
प्रकाशित 12। मई 2022 13। मई 2022 By क्लाउडिया Wendt	प्रत्रिक्रिया छैन Epopeia खेलहरूमा
Epopeia Games ब्राजिलको खेल स्टुडियो हो जसले 2010 देखि प्रोग्रामिङ गेमहरू गरिरहेको छ। तिनीहरूको खेलहरू मध्ये एक मेगा मोन्स्टर पार्टी हो। Epopeia Games खेल Gaucho and the Grassland Outland Rapture IIN Mega Monster Party Goroons विकासकर्ताको वेबसाइटमा जानुहोस्
वालेस र Gromit
प्रकाशित 12। मई 2022 13। मई 2022 By क्लाउडिया Wendt	प्रत्रिक्रिया छैन वालेस र ग्रोमिटलाई
यस पोष्टमा म वालेस र ग्रोमिट खेलहरूको एक सिंहावलोकन दिन्छु। वालेस र ग्रोमिट वालेस र ग्रोमिट निक पार्कको एउटै नामको एनिमेटेड श्रृंखलाका मुख्य पात्र हुन्। उनले तिनीहरूलाई आफ्नो कम्पनी Aardman एनिमेशन संग उत्पादन गरे। तथ्याङ्कहरू घुम्ने फ्रेमहरूमा Plasitlin बाट मोडेल गरिएको थियो। एनिमेसनहरू क्लेमेसन भनिने स्टप-मोशन प्रविधि प्रयोग गरेर बनाइएका थिए। वालेस…
थप पढ्नुहोस् "वालेस र ग्रोमिट" »
12... 155 अर्को
आज प्रयोगकर्ताहरू: 18
प्रयोगकर्ताहरू हिजो: ०
कुल हेराइहरू: 56942
द्वारा संचालित WPS काउन्टर काउन्टर
गेमिंग साइटहरु को सिफारिश गरीयो (5)
खेल र कविता (1.335)
हराएको खेल कर्नर (2)
कार्ड खेल (1)
संगीत खेलहरू (1)
दृश्य उपन्यास (4)
लुकेको वस्तु (4)
खेल विकासकर्ता (60)
खेल प्रोग्रामिंग (97)
निष्क्रियता सकियो! यस वेबसाइटमा तपाईंको भ्रमणहरू अब वेब विश्लेषणद्वारा रेकर्ड गरिने छैन। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि यदि तपाईंले आफ्नो ब्राउजरमा भण्डारण गरिएका कुकीहरू हटाउनुभयो भने यस वेबसाइटमा रहेको Matomo निष्क्रियता कुकी पनि मेटिनेछ। साथै, यदि तपाइँ फरक कम्प्युटर वा वेब ब्राउजर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले फेरि अप्ट-आउट प्रक्रिया मार्फत जान आवश्यक छ।
तपाइँसँग तपाइँले यहाँ लिने कार्यहरूलाई विश्लेषण र लिङ्क हुनबाट रोक्नको विकल्प छ। यसले तपाइँको गोपनीयताको सुरक्षा गर्नेछ, तर मालिकलाई तपाइँको कार्यहरूबाट सिक्न र तपाइँ र अन्य प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपयोगिता सुधार गर्नबाट पनि रोक्नेछ।
यस वेबसाइटमा तपाईंको भ्रमण हाल माटोमो वेब विश्लेषण द्वारा रेकर्ड गरिएको छ। अप्ट-आउट गर्न यो चेकबक्स अचयन गर्नुहोस्। यस वेबसाइटमा तपाईंको भ्रमण हाल Matomo वेब विश्लेषण द्वारा रेकर्ड गरिएको छैन। अप्ट-इनको लागि यो चेकबक्स सक्रिय गर्नुहोस्।
ट्र्याकिङ अप्ट-आउट प्रकार्य सक्रिय कुकीहरू आवश्यक छ।
के तपाइँ एक खेल को लागी हेर्दै हुनुहुन्छ?
कार्य साहसिक Capcom डाएडालिक डाएडालिक मनोरन्जन डेक १३ Devcom २०२० हराएको खेल कर्नर एस्केप कक्ष Gamescom 2019 Gamescom 2020 Gamescom 2021 GB जीबीए GBC Haemimont खेल हाइकू खेलहरू हरर जम्प र रन कालिप्सो मिडिया मेगा मानिस N64 एनडीएस NES निन्टेन्डो डी एस nintendo स्विच PC PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PSP दुर्लभ सामान रेसि। खेल आरपीजी देखा शूटर SNES रणनीति स्विच गर्नुहोस् एकता दृश्य उपन्यास Xbox XBox एक
TextMesh प्रो 14 दृश्यहरु
२ डी प्रकाश र एकता मा छाया 13 दृश्यहरु
एक स्प्राइट रेन्डरर के हो? 12 दृश्यहरु
Varsav खेल स्टुडियो 10 दृश्यहरु
ऐस लडाई अग्रिम9दृश्यहरु
हार्ड वेस्ट २: २०२२ को रिलीज 8 दृश्यहरु
सेतो उल्लू इंक। 8 दृश्यहरु
भगोडा: एक सडक साहसिक7दृश्यहरु
टम्ब रेडर लीजेंड7दृश्यहरु
Heave हो7दृश्यहरु
2022 सक्छ (36)
अप्रिल 2022 (77)
फेब्रुअरी 2022 (71)
डिसेम्बर 2021 (60)
नोभेम्बर 2021 (63)
अक्टोबर 2021 (65)
सेप्टेम्बर 2021 (65)
अगस्ट 2021 (88)
जुन 2021 (60)
2021 सक्छ (48)
अप्रिल 2021 (42)
फेब्रुअरी 2021 (82)
डिसेम्बर 2020 (56)
नोभेम्बर 2020 (56)
अक्टोबर 2020 (56)
सेप्टेम्बर 2020 (59)
अगस्ट 2020 (64)
जुन 2020 (50)
2020 सक्छ (60)
अप्रिल 2020 (60)
Borderlands खेल र कविता
२ डी प्रकाश र एकता मा छाया खेल प्रोग्रामिंग
जेम्स बण्ड - 007 - संसार पर्याप्त छैन कार्य
कुलपति खेल र कविता
विदेशी सिंड्रोम खेल र कविता
बसोबास गर्नेहरु १ खेल र कविता
क्रोज4को सडकहरु खेल र कविता
प्रतिलिपि अधिकार © २०२२ खेल र कविता।
द्वारा संचालित प्रेसबुक समाचार डार्क विषयवस्तु
यो वेबसाइट प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गर्न कुकीहरु को उपयोग गर्दछ। तपाइँ यहाँ यी कुकीहरु बन्द गर्न सक्नुहुन्छ।
यो वेबसाइटले तपाइँको अनुभवलाई सुधार गर्न कुकीज प्रयोग गर्दछ। हामी मान्दछौँ कि तपाईं यससँग ठीक हुनुहुन्छ, तर तपाई चाहानुहुन्छ भने तपाईले अप्ट आउट गर्न सक्नुहुनेछ। कुकी सेटिंग्सस्वीकार्नुहोस् / स्वीकार गर्नुहोस्
गोपनीयता र कुकी सेटिंग्स
कुकीज / गोपनीयता सिंहावलोकन मा जानकारी
यस वेबसाइटले कार्यक्षमता र प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्दछ। त्यहाँ दुई प्रकारका कुकीहरू छन्: आवश्यकहरू ब्राउजरमा भण्डार गरिएका छन् र वेबसाइटको सही कार्यका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। प्रयोग गरिएका अनावश्यक वा तेस्रो-पक्ष कुकीहरू विश्लेषणको लागि प्रयोग गरिन्छ र हामीलाई यो वेबसाइटको प्रयोग देखाउँदछ। यी कुकीहरू ब्राउजरमा पनि भण्डारण गरिएका छन्, तर तपाईंले स्पष्ट रूपमा अनुमति दिनुभयो भने मात्र। निम्नमा, तपाईंसँग यी तेस्रो-पक्ष कुकीहरू निषेध गर्ने विकल्प छ। यी कुकीहरू बन्द गर्नाले वेबसाइटको व्यवहारलाई असर गर्न सक्छ।
AWSALBCORS7दिन यो कुकी Amazon Web Services द्वारा व्यवस्थित गरिएको छ र लोड सन्तुलनको लागि प्रयोग गरिन्छ।
ग्राहक_आईडी 10 वर्ष यो कुकी प्रमाणीकरण जानकारी पास गर्न प्रयोग गरिन्छ।
कूकीलाविनफो-चेकबक्स-विज्ञापन 1 वर्ष GDPR कुकी सहमति प्लगइन द्वारा सेट गरिएको, यो कुकी "विज्ञापन" कोटिमा कुकीहरूको लागि प्रयोगकर्ताको सहमति रेकर्ड गर्न प्रयोग गरिन्छ।
कूकीलाविनफो-चेकबक्स-एनालिटिक्स 1 वर्ष GDPR कुकी सहमति प्लगइन द्वारा सेट गरिएको, यो कुकी "विश्लेषण" कोटिमा कुकीहरूको लागि प्रयोगकर्ताको सहमति रेकर्ड गर्न प्रयोग गरिन्छ।
कूकीलाविनफो-चेकबक्स-कार्यात्मक 1 वर्ष कुकीहरू "कार्यात्मक" श्रेणीमा रहेका कुकीहरूका लागि प्रयोगकर्ताको सहमति रेकर्ड गर्न GDPR कुकी कन्सेन्ट प्लगइनद्वारा सेट गरिएको छ।
कूकीलाविनफो - चेकबक्स-आवश्यक 1 वर्ष GDPR कुकी कन्सेन्ट प्लगइनद्वारा सेट गरिएको, यो कुकी "आवश्यक" वर्गमा रहेका कुकीहरूका लागि प्रयोगकर्ताको सहमति रेकर्ड गर्न प्रयोग गरिन्छ।
कूकीलाविनफो-चेकबक्स-गैर-आवश्यक 1 वर्ष GDPR कुकी सहमति प्लगइन द्वारा सेट गरिएको, यो कुकी "गैर-आवश्यक" वर्गमा कुकीहरूको लागि प्रयोगकर्ताको सहमति रेकर्ड गर्न प्रयोग गरिन्छ।
cookielawinfo-चेकबक्स-अन्य 1 वर्ष GDPR कुकी सहमति प्लगइन द्वारा सेट गरिएको, यो कुकी "अन्य" कोटिमा कुकीहरूको लागि प्रयोगकर्ताको सहमति भण्डारण गर्न प्रयोग गरिन्छ।
कूकीलाविनफो-चेकबक्स-प्रदर्शन 1 वर्ष GDPR कुकी सहमति प्लगइन द्वारा सेट गरिएको, यो कुकी "कार्यसम्पादन" कोटिमा कुकीहरूको लागि प्रयोगकर्ताको सहमति भण्डारण गर्न प्रयोग गरिन्छ।
CookieLawInfoConsent 1 वर्ष सम्बन्धित कोटीको पूर्वनिर्धारित बटन स्थिति र CCPA को स्थिति रेकर्ड गर्दछ। यो केवल प्राथमिक कुकी संग समन्वय मा काम गर्दछ।
ezCMPCCS 1 वर्ष Ezoic ले यो कुकीलाई ट्र्याक गर्न सेट गर्दछ जब प्रयोगकर्ताले तथ्याङ्क कुकीहरूमा सहमति दिन्छ।
सबै कुकीहरू जुन वेबसाइटलाई ठीकसँग काम गर्नको लागि प्रत्यक्ष रूपमा आवश्यक छैन र विश्लेषण, विज्ञापन, वा अन्य इम्बेडेड सामग्री मार्फत व्यक्तिगत प्रयोगकर्ता डेटा सङ्कलन गर्न प्रयोग गरिन्छ गैर-आवश्यक कुकीहरू भनिन्छ। यी कुकीहरू प्रयोग गर्न सक्नु अघि प्रयोगकर्ताको सहमति प्राप्त गर्न अनिवार्य छ। यदि कुकीहरूको प्रयोगको लागि सहमति दिइएन भने, तिनीहरू प्रयोग गरिने छैनन् र आवश्यक कुकीहरू मात्र सक्रिय हुनेछन्।
__qca १ वर्ष २ 1 दिन __qca कुकी Quantcast सँग सम्बन्धित छ। यो बेनामी डाटाले हामीलाई प्रयोगकर्ताहरूको आवश्यकताहरू अझ राम्रोसँग बुझ्न र तदनुसार वेबसाइटलाई अनुकूलित गर्न मद्दत गर्दछ।
euds सत्र यो कुकी रकेट ईन्धन द्वारा लक्षित विज्ञापनको लागि सेट गरिएको छ ताकि प्रयोगकर्ताहरूलाई सान्दर्भिक विज्ञापनहरू देखाइन्छ।
i 10 वर्ष यो कुकी OpenX द्वारा अज्ञात प्रयोगकर्ता डेटा रेकर्ड गर्न सेट गरिएको छ, जस्तै IP ठेगाना, भौगोलिक स्थान, भ्रमण गरिएका वेबसाइटहरू, प्रयोगकर्ताद्वारा क्लिक गरिएका विज्ञापनहरू आदि, सान्दर्भिक विज्ञापनका लागि।
यहाँ १ वर्ष २ 1 दिन गुगल DoubleClick आईडीई कुकीज कसरी प्रयोगकर्ता वेबसाइट सान्दर्भिक विज्ञापनहरु संग र प्रयोगकर्ता प्रोफाइल को अनुसार उनीहरुलाई पेश गर्न को लागी वेबसाइट को उपयोग को बारे मा जानकारी भण्डारण गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ।
mc १ वर्ष १ महिना Quantserve ले वेबसाइटमा प्रयोगकर्ताको व्यवहार अज्ञात रूपमा ट्र्याक गर्न mc कुकी सेट गर्दछ।
रुड १ वर्ष २ 1 दिन रुड कुकी Rocketfuel को स्वामित्वमा छ र प्रयोगकर्ता डेटा दर्ता गर्दछ, जस्तै IP ठेगाना, स्थान, इत्यादि विज्ञापन प्रदर्शनलाई अनुकूलन गर्ने उद्देश्यको लागि।
रुडहरू सत्र यो कुकी Rocketfuel को स्वामित्वमा छ र दर्शकहरूलाई लक्षित गर्न र व्यक्तिगत विज्ञापनहरू डेलिभर गर्न अज्ञात प्रयोगकर्ता डेटा सङ्कलन गर्दछ।
test_cookie 15 मिनेट Test_cookie doubleclick.net द्वारा सेट गरीएको छ र यदि प्रयोगकर्ता को ब्राउजर कुकीहरु लाई समर्थन गर्दछ निर्धारण गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ।
yt.innertube::nextId कहिल्यै YouTube द्वारा सेट गरिएको यो कुकीले YouTube बाट प्रयोगकर्ताले देखेका भिडियोहरूमा डेटा भण्डारण गर्न एक अद्वितीय ID दर्ता गर्दछ।
yt.innertube::अनुरोधहरू कहिल्यै YouTube द्वारा सेट गरिएको यो कुकीले YouTube बाट प्रयोगकर्ताले देखेका भिडियोहरूमा डेटा भण्डारण गर्न एक अद्वितीय ID दर्ता गर्दछ।
कार्यात्मक कुकीहरू सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूमा जानकारी साझा गर्ने, प्रतिक्रिया सङ्कलन र अन्य तेस्रो-पक्ष कार्यहरू जस्ता निश्चित कार्यहरू सक्षम गर्न प्रयोग गरिन्छ।
pll_language 1 वर्ष Pll _language कुकीलाई Polylang द्वारा वेबसाइटमा फर्किँदा प्रयोगकर्ताले चयन गरेको भाषा सम्झन र अर्को तरिकामा उपलब्ध नभएको बेला भाषा जानकारी प्राप्त गर्न प्रयोग गरिन्छ।
कार्यसम्पादन विश्लेषण कुकीहरू प्रदर्शनका मुख्य पक्षहरू विश्लेषण र बुझ्न प्रयोग गरिन्छ। यसले वेबसाइटलाई निरन्तर सुधार गर्न मद्दत गर्दछ र यसरी आगन्तुकहरूलाई राम्रो प्रयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्दछ।
AWSALB7दिन AWSALB एउटा एप्लिकेसन लोड ब्यालेन्सर कुकी हो जुन Amazon Web Services द्वारा लक्ष्यमा सत्रलाई नक्सा गर्न सेट गरिएको छ।
ezds7वर्ष ezds कुकी प्रदायक Ezoic द्वारा सेट गरिएको छ, र प्रयोगकर्ताको ब्राउजरको पिक्सेल साइज भण्डारण गर्न, प्रयोगकर्ता अनुभवलाई निजीकृत गर्न र सामग्री फिट भएको सुनिश्चित गर्न प्रयोग गरिन्छ।
ezoab_10342घण्टा Ezoic ले यो कुकीलाई बिभिन्न सुविधाहरू र कार्यक्षमता परीक्षण गर्न प्रयोग गर्दछ।
ezohw7वर्ष ezohw कुकी प्रदायक Ezoic द्वारा सेट गरिएको छ, र प्रयोगकर्ताको ब्राउजरको पिक्सेल साइज भण्डारण गर्न, प्रयोगकर्ता अनुभव निजीकृत गर्न र सामग्री फिट भएको सुनिश्चित गर्न प्रयोग गरिन्छ।
ymex 1 वर्ष Yandex ले यो कुकीलाई वेबसाइटमा प्रयोगकर्ता व्यवहारको बारेमा जानकारी सङ्कलन गर्न सेट गर्दछ। यो जानकारी वेबसाइट विश्लेषण र वेबसाइट अनुकूलन को लागी प्रयोग गरिन्छ।
yuidss 1 वर्ष यान्डेक्सले आगन्तुकलाई चिन्नको लागि प्रयोगकर्ताको ब्राउजरमा यो कुकी भण्डार गर्दछ।
आगन्तुकहरूले यस वेबसाइटसँग कसरी अन्तरक्रिया गर्छन् भनेर बुझ्न विश्लेषणात्मक कुकीहरू प्रयोग गरिन्छ। यी कुकीहरूले आगन्तुकहरूको संख्या, बाउन्स दर (वेबसाइट भ्रमण गर्ने र तुरुन्तै छोड्ने आगन्तुकहरूको संख्या), आगन्तुकको मूल देश, आदि बारे जानकारी प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
__गडा १ वर्ष २ 1 दिन Google द्वारा सेट गरिएको __gads कुकी, DoubleClick डोमेन अन्तर्गत भण्डारण गरिएको छ र प्रयोगकर्ताहरूले विज्ञापन हेरेको संख्या ट्र्याक गर्दछ, अभियानको सफलता मापन गर्दछ र यसको राजस्व गणना गर्दछ। यो कुकीलाई तिनीहरू सेट गरिएको डोमेनबाट मात्र पढ्न सकिन्छ र अन्य साइटहरू मार्फत ब्राउज गर्दा कुनै पनि डेटा ट्र्याक गर्दैन।
_गु 1 महिना यो कुकी प्रदायक Getsitecontrol द्वारा सेट गरिएको हो। यो कुकी प्रयोगकर्ताहरूलाई छुट्याउन प्रयोग गरिन्छ।
_ जिम_डी 1 वर्ष Yandex ले प्रयोगकर्ताको पहिलो साइट सत्रको मिति भण्डारण गर्न यो कुकी सेट गर्दछ।
_ जिम_साद 20 घण्टा Yandex ले यो कुकीलाई आगन्तुकसँग विज्ञापन ब्लकरहरू छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न सेट गर्दछ।
_ym_uid 1 वर्ष Yandex ले साइट प्रयोगकर्ताहरू पहिचान गर्न यो कुकी सेट गर्दछ।
eu १ वर्ष २ 1 दिन यो कुकी Rocketfuel को स्वामित्वमा छ र दर्शकहरूलाई लक्षित गर्न र व्यक्तिगत विज्ञापनहरू डेलिभर गर्न अज्ञात प्रयोगकर्ता डेटा सङ्कलन गर्दछ।
ezepvv 1 दिन यो कुकी प्रदायक Ezoic द्वारा सेट गरिएको छ प्रयोगकर्ताले कुन पृष्ठहरू हेरेका छन् ट्र्याक गर्न।
ezoadgid_1034 30 मिनेट Ezoic ले प्रयोगकर्ताको उमेर र लिङ्ग कोटिको लागि आईडी रेकर्ड गर्न यो कुकी प्रयोग गर्दछ।
ezoref_10342घण्टा Ezoic ले यो कुकीलाई रेफरिङ डोमेन भण्डारण गर्न प्रयोग गर्दछ, अर्थात् प्रयोगकर्ताले हालको वेबसाइटमा आउनु अघि जुन वेबसाइटमा थियो।
ezouspva सत्र ezouspva कुकी प्रदायक Ezoic द्वारा सेट गरिएको छ र प्रयोगकर्ताले सधैं भ्रमण गरेको पृष्ठहरूको संख्या ट्र्याक गर्न प्रयोग गरिन्छ।
ezouspvv सत्र ezouspvv कुकी प्रदायक Ezoic द्वारा सेट गरिएको छ र प्रयोगकर्ताले सधैं भ्रमण गरेको पृष्ठहरूको संख्या ट्र्याक गर्न प्रयोग गरिन्छ।
UserID13महिना यो कुकी ADITION Technologies AG द्वारा सेट गरिएको छ, वेबसाइटको आगन्तुकको लागि एक अद्वितीय र अज्ञात ID को रूपमा, धेरै सत्रहरूमा अद्वितीय प्रयोगकर्ताहरू पहिचान गर्न।
याब्स-सिड सत्र Yandex ले सत्र ID भण्डारण गर्न यो कुकी सेट गर्दछ।
yandexuid 1 वर्ष Yandex ले साइट प्रयोगकर्ताहरू पहिचान गर्न यो कुकी सेट गर्दछ।
विज्ञापन कुकीहरू आगन्तुकहरूलाई सान्दर्भिक विज्ञापनहरू र मार्केटिङ अभियानहरू देखाउन प्रयोग गरिन्छ। यी कुकीहरूले आगन्तुकहरूलाई ट्र्याक गर्छन् जब तिनीहरू वेबसाइट भ्रमण गर्छन् र जानकारी सङ्कलन गर्छन् जसले तिनीहरूलाई अनुकूलित विज्ञापनहरू सेवा गर्न अनुमति दिन्छ।
अन्य अवर्गीकृत कुकीहरूमा ती समावेश छन् जसलाई विश्लेषण गरिएको छ तर अझै कोटि तोकिएको छैन।
_auid 1 वर्ष कुनै विवरण उपलब्ध छैन।
सक्रिय_टेम्प्लेट::3326192दिन
कुनै वर्णन छैन
app रिलीज सत्र कुनै विवरण उपलब्ध छैन।
ब्याकENDID सत्र कुनै विवरण उपलब्ध छैन।
dspid 1 वर्ष कुनै विवरण उपलब्ध छैन।
ezoab_3326192घण्टा कुनै वर्णन छैन
ezoadgid_332619 30 मिनेट कुनै वर्णन छैन
ezopvc_332619 30 मिनेट कुनै वर्णन छैन
ezoref_3326192घण्टा कुनै वर्णन छैन
ezosuibasgeneris-1 1 वर्ष कुनै वर्णन छैन
ezovid_332619 30 मिनेट कुनै वर्णन छैन
ezovuuid_332619 30 मिनेट कुनै वर्णन छैन
ezovuuidtime_3326192दिन कुनै वर्णन छैन
ezux_lpl_332619 1 वर्ष कुनै वर्णन छैन
f_0013महिना कुनै वर्णन छैन
g_001 1 दिन कुनै वर्णन छैन
gt_auto_switch 1 महिना कुनै विवरण उपलब्ध छैन।
lp_332619 30 मिनेट कुनै वर्णन छैन
mts_id Years बर्ष ११ महिना २ days दिन कुनै विवरण उपलब्ध छैन।
mts_id_last_sync Years बर्ष ११ महिना २ days दिन कुनै विवरण उपलब्ध छैन।
pvc_visits 1 वर्ष यो कुकी पोस्ट-दृश्य-काउन्टर द्वारा बनाईएको हो। यो कुकी पोस्टमा भ्रमणहरूको संख्या गणना गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसले आगन्तुकद्वारा पोस्टको दोहोर्याइएको हेराइहरू रोक्न पनि मद्दत गर्दछ।
एसआरपी सत्र कुनै विवरण उपलब्ध छैन।
प्रयोगकर्ता ID5महिना 27 दिन कुनै वर्णन छैन
आवश्यक कुकीहरु वेबसाइट को लागी ठीकसँग काम गर्न को लागी आवश्यक छ। यस श्रेणी मा मात्र कुकीहरु छन् कि आधारभूत कार्यक्षमता र वेबसाइट को सुरक्षा कार्यहरु लाई सक्षम गर्दछ। यी कुकीहरु कुनै पनी व्यक्तिगत डाटा बचत गर्दैनन्।